Puntland oo markeeda sheegtay in magaalada Gaalkacyo aysan ka talineyn labo Maamul (Daawo Sawirada) | shumis.net
Home » News » Puntland oo markeeda sheegtay in magaalada Gaalkacyo aysan ka talineyn labo Maamul (Daawo Sawirada)
Puntland oo markeeda sheegtay in magaalada Gaalkacyo aysan ka talineyn labo Maamul (Daawo Sawirada)
Wasiiro katirsan Maamulka Puntland uu hogaaminayay Wasiirka Arimaha gudaha maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash) ayaa booqasho ku tagay dhismaha maxjarka magaalada Gaalkacyo oo ahaa halka uu ka bilowday dagaalka u dhaxeeya Galmudug iyo Puntland.
Axmed Karaash oo Warbaahinta kula hadlay halka laga dhisayo maxjarka xoolaha ee magaalada ayaa sheegay in dhismaha Maxjarka uu socdo ayna dhameestiri doonaan, waxa uuna intaa raaciyay in aysan joojineyn dhismahaasi wax kasta oo dhaca.
Wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay hadalkii dhawaan kasoo yeeray Madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ahaa in magaalada Gaalkacyo aysan ka talineyn labo maamul, waxa uuna tilmaamay in kalmadaasi ay soo dhaweenayaan kuna faraxsan yihiin.
”Waa runtiis Cabdikariin Gaalkacyo labo maamul kama wada talin doonaan, hadalkan waxa uu ahaa in anagu niraahno balse isaga ayaa noo yiri, anagu waan xishooneynay darisnimo iyo nabad ayaan rabnay balse hadii isagu noo yiri hadalkaa waan la qabnaa Gaalakcyana labo maamul kama wada talin doonaan” Ayuu yiri Axmed Karaash.
Maamulka Puntland ayaa wali wada dhismaha maxjarka xoolaha ee laga dhisayo magaalada Gaalkacyo, dhismahan ayaana ahaa midkii sababta u ahaa in uu dagaal ka dhax qarxo ciidamo kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland oo wali is hor fadhiya.
Title: Puntland oo markeeda sheegtay in magaalada Gaalkacyo aysan ka talineyn labo Maamul (Daawo Sawirada)